ट्याटुको शौखिन हुनुहुन्छ ? सावधान ! | Ratopati
यदि ट्याटु खोप्न सौखिन हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । यो शौखले तपाईंलाई मुटुसम्बन्धि खतरा बढाउन सक्छ । जर्नल अफ अप्लाइड फिजियोलोजीमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार छालामा ट्याटु भएक कारण त्यसमा पसिना नियन्त्रण गर्ने क्षमता घट्ने गर्छ । जसका कारण शरीरको तापक्रम बढ्ने गर्छ । यसले हाइपोथर्मिया र हिट हार्ट अट्याकको खतरा बढाउन सक्छ । अनुसन्धानका अनुसार ट्याटु जति ठूलो हुन्छ त्यति नै खतरनाक हुनसक्छ ।
त्यसैले खतरा बढेको होः
यस्ता खतरा पहिचान गरियोः
– अनुसन्धानमा यस्ता मानिसहरुलाई समावेश गरियो जसको हातको माथिल्लो र तल्लो हिस्सामा ट्याटु बनेको थियो । उनीहरुको हातमा कम्तीमा ५.६ वर्ग सेन्टिमिटरको ट्याटु थियो ।
– उनीहरुको शरीरमा पसिना पैदा गर्नका लागि परफ्यूजन सुट लगाउन लगाइयो । जसका कारण तापक्रम १२० डिग्री फरेनहाइटसम्म पुग्यो । अनुसन्धानको क्रममा ट्याटु भएको र सामान्य छालाको अनुसन्धान गरियो ।
– अनुसन्धाताले छालामा रक्त सञ्चार परीक्षण गर्नका लागि लेजर प्रविधिको प्रयोग गरे । यसमा छालामा ट्याटु हुँदा शरीरमा तापक्रम कायम राख्न समस्या देखियो ।
– ट्याटुका कारण पसिना कम आउँछ, त्यसैले शरीरमा तापक्रम बढ्ने गर्छ । यस्तोमा मानिसहरुमा हाइपोथर्मिया (शरीरमा तापक्रम सामान्यभन्दा धेरै बढ्नु) र हिट हार्ट अट्याकको खतरा बढ्न सक्छ ।
– यो हृदयघात त्यतिबेला हुन्छ जब शरीरको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि हुन्छ ।